Ighachitere 100w ikanam awara awara ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:100w Ìhè Ngwá Agha Ikike,Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ,Uzo Ogugu Uhie Ozo
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > Ighachitere 100w ikanam awara awara ọkụ
Ighachitere 100w ikanam awara awara ọkụ
Ihe Nlereanya.: 100w LED Canopy Light Fixtures
Item: Recessed 100w LED Canopy Light Fixtures
MOQ: 1 PCS (Recessed 100w LED Canopy Light Fixtures)
Ubu oke: 100,000PCS/month
Ebe Mmalite: Shenzhen
Uhie Igodo nke Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai 6 Ọkụ Mmiri Dopụl na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi nke ọkụ ọkụ na gburugburu ebe obibi nke e mere iji dochie anya ọdịnala ọdịda anyanwụ Ìhè Ndị Na-awụpụ Ọkụ na-egosipụta nhazi ihe ngosi kachasị mma nke na-enye ọkwa dị ala na-ekesa ìhè. Nke a na-eme ka ngwaahịa a bụrụ ihe zuru oke maka ngwa dịka ọkụ ọkụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, ọkụ ọkụ igwe, nnukwu elu ma ọ bụ ọkụ ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ọkụ ọkụ na ụlọ ngosi.
• Ọ bụghị ịgba ọkụ
Ọ dịghị RF ndabichi
• Ọ bụghị UV radieshon
Ọ bụghị mercury
• 60% obere ike oriri karịa isi mmalite isi mmalite
Akwụsị ọkụ ọkụ
• Ọkụ ọma ọkụ
· Na-enwu gbaa ọkụ
• Ndozi n'efu
Ekwenyere CE & RoHS
Ntị Tupu echichi:
· Biko jiri nlezianya gụọ ntụziaka ntụziaka tupu iji ngwaahịa.
Biko lelee ma ọ bụrụ na ike ahụ na-agbaso ihe ndị a chọrọ. Volta ọsọ ọsọ nke ngwaahịa bụ AC85-300V
· Biko gbanyụọ ọkụ ahụ tupu etinye.
Nnyocha na ịka nká:
Nkwakọ ngwaahịa na mbupu:
(Agba 100w ikanam kanopi Light Fixtures)
Ozi Ụlọ Ọrụ:
Shenzhen RIYUEGUANGHUA Technology Co., Ltd nọ na-arụ ọrụ na-eburu ọkụ ebe ọ bụ na 2010. Ụlọ ọrụ ụlọ anyị nwere ebe dị mita 1500 square. Kwadebere na elu mmepụta ụlọ ọrụ na mmepụta edoghi nke ikanam tube ìhè, ikanam Iju Mmiri Ìhè, Diana Street Ìhè, Led High n'ọnụ mmiri ìhè, ikanam kanopi ìhè, ikanam elu mast ìhè, ikanam ọwara ìhè, Ada eto eto ìhè, ikanam n'uko ìhè, ikanam troffer ìhè , na ọkụ ndị ọzọ n'èzí na nke azụmahịa.
Dabere na mma iji lanarị, ihe ọhụrụ iji zụlite. Mee ka "onye ahịa buru ụzọ, nke mbụ, aha ọma, ọrụ mbụ". Na-agbasi mbọ ike ịbịaru ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ nke kachasị ọrụ na ngwa ngwa, na-adabere n'ịdị mma na nhazigharị nke ụkpụrụ ọrụ.
Ngwaahịa : Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Philips 3030 150w Diana Uhie Kpọtụrụ ugbu a
Ike Dị Ike 200w LED Caopy Lighting with IP65 Kpọtụrụ ugbu a
11000lm IP65 100W LED Wụnye Ìhè Kpọtụrụ ugbu a
Philips 200W Ọkụ Ngwá Agha Kpọtụrụ ugbu a
50W 5-Year Warranty Gas Station LED Canopy Light Kpọtụrụ ugbu a
High Quality 250W Philips Meawell Diana Dopụl Ìhè Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Gas Ga-adị 100W Ọkụ Mmiri Ikike Mmiri Kpọtụrụ ugbu a
150W Bright Petrol LED Canopy Light Kpọtụrụ ugbu a
100w Ìhè Ngwá Agha Ikike Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Uzo Ogugu Uhie Ozo 50w Ìhè Ngwá Agha Ikike 150w Ọkụ Ngwá Agha 30w ìhè uhie 2000w Led Ìhè Ìhè 60W Ìhè Ntanụ Anya